Juergen Klopp Oo Xaqiijiyay In Sababtii Uu Mohamed Salah U Badalay | Raadgoob
Juergen Klopp Oo Xaqiijiyay In Sababtii Uu Mohamed Salah U Badalay
Tababaraha kooxda Liverpool ee Juergen Klopp ayaa xaqiijiyay in sababtii uu Mohamed Salah uga saaray kulankii Leicester City ay ahayd in uu dhaawac soo gadhay wuxuuna cadeeyay in shaqaalaha caafimaadka kooxdiisu ay qiimayn doonaan xaalada xidiga ree Masar. Mohamed Salah ayaa ahaa xidigii Liverpool guusha ku hogaamiyay kulankii Anfield isaga oo laba gool ka dhaliyay Leicester City.
Mohamed Salah ayaa gool dhalintiisa Premier League ee xili ciyaareedkan ka dhigay 17 gool iyo waliba 5 gool caawineed taas oo ah waxtarka ugu wayn ee uu sameeyay xidig ka tirsan kooxda Liverpool. Laakiin warka uu Klopp ku sheegay in Mohamed Salah uu dhaawac soo gaadhay ayaa naxdin ku ah jamaahiirta Reds ee ku faraxsan qaab ciyaareedka Salah.
Liverpool ayaa muddo 48 saacadood ka yar la ciyaari doonta kooxda Burnley waana kulan uu Klopp hubin doono haddii Mohamed Salah uu taam u noqon karo. Inkasta oo uu Klopp haysto ciyaartoy badan oo booska Salah ka ciyaari kara haddana waxa uu xidiga ree Masar cidkasta kaga horeeyaa gool dhalinta iyo fursad abuurista wada socda ee uu kooxdiisa Reds u sameeyo.
Kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartii xamaasada badnayd ee Anfield ayuu Klopp saxaafada u sheegay: “Salah waxa uu u baahan doonaa in ay shaqaalaha caafimaadka kooxdu hubiyaan si ay u arkaan haddii uu awood u yeelan karo in uu ku lug lahaado kulanka Burley oo ah in ka yar 48 saacadood. Waqti xaadirkan anigu ma hubo waxa uu yahay laakiin wuu dhaawacmay. Marnaba may ahayn calaamad fiican haddii aan daacad ahaado”.
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaa waajib nagu ah in aanu eegno waxa ay dhibaatadiisu ahayd, waxaanu eegi doonaa waxa uu qaban karo kualnka soo socda”.
Mohamed Salah ayaa hal gool ka hooseeya Harre Kane oo gool dhalinta Premier League 18 gool ku haya wuxuuna Salah ilaa hadda soo dhaliyay 17 gool oo Premier League ah isaga oo cid kasta kaga yaabsanaya gool dhalinta cajiibka ah ee uu Anfield kaga raaxaysanayo.